storage 1TB ပါတဲ့ Xiaomi Mi AC router မှာ Data Sharing local website တစ်ခုလုပ်ချင်လို့ပါ။ — MYSTERY ZILLION
storage 1TB ပါတဲ့ Xiaomi Mi AC router မှာ Data Sharing local website တစ်ခုလုပ်ချင်လို့ပါ။
December 2015 in Web Development
ရန်ကုန်မှာ sinphyutaw ဆိုတဲ့ group ကနေပြီး လူစည်ကားရာနေရာတွေမှာ fastdown wifi ဆိုပြီး
access point လေးတွေကို xiaomi mi router နဲ့အခမဲ့ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ fastdown wifi
ကွန်ယက်မိနေတဲ့နေရာအတွင်းမှာ ဖုန်း / laptop တွေက တဆင့် Movies/MTV/MP3/PDF/Application
တွေကို www.sinphytaw.com ဆိုတဲ့ offline webpage ကို ၀င်ရောက်ပြီး အခမဲ့ download လုပ်ခွင့်
ပေးထားပါတယ်။ Mini Elibrary လိုပုံစံမျိုးထင်ပါတယ်။ Mini Elibrary ထက်ပိုကောင်းတာက pdf တင်
မကပဲ movie/mtv/mp3 နဲ့ applicationတွေကို offline download လုပ်ခွင့်ရတော့ speed ကလဲ
အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်။ ကျနော် သိချင်တာက
1. www.sinphytaw.com ကို ဘာ နဲ့ရေးထားတာလဲ (wordpress နဲ့ တော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်)
2. PC မပါပဲ router မှာ တင် website ကို run လို့ရလား? ရရင် ဘယ်လို run ပါသလဲ ( mi router က
builtin storage 1TB ပါပါတယ်။ xampp ကိုတော့ portable webserver အဖြစ် install လုပ်လို့ရတယ်
3. အခု topic ကို ဆရာ အစ်ကိုများ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
ရည်ရွယ်ချက်က ကျနော့်မြို့မှာ internet လိုင်းများမကောင်းမွန်သေးတဲ့အတွက် သူတို့ လိုမျိုး မြို့ လူစည်
ကားရာနေရာမှာ ကျနော့်နှင့်သူငယ်ချင်းများ ငွေစိုက်ထုတ်ပြီး www.sinphytaw.comလိုမျိုး offline data
sharing site လေး တစ်ခု လွင့်ချင်လို့ပါ။ sinphytaw ကို ဖုန်းဆက်မေးပြီးပါပြီ ။ နယ်ဘက်တွေကို
သူတို့ မလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ မလုပ်နိုင်လျှင် ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ ပြောပြပါလားဆိုတော့
**မပြောပြချင်လို့လား? ဒါမှမဟုတ် တစ်ကယ် တတ်ကျွမ်းတဲ့သူနဲ့ ဖုန်းမရလို့ လားမသိပါ။ ကျနော်
သိချင်တာ ကို ဂဂနန မသိရလို့ ဒီ group က အစ်ကိုတွေဆီက အကူအညီတောင်းတာပါခင်ဗျာ။
December 2015 edited December 2015 Administrators
1 . www.sinphytaw.com က local network ဖြစ်တဲ့ အတွက် online ကနေ ဝင်လို့ မရပါ။ သူ့ router ကနေ ပဲ ဝင်လို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာနဲ့ ရေးထားလဲ ကျွန်တော်တို့ မသိနိုင်ပါ။
PC မပါပဲ router မှာ run ဖို့ router ရဲ့ function ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ တချို့ router တွေက file sharing အတွက် UPNP ပါတယ်။ linux ကို သုံးထားတဲ့ router တော်တော်များများကတော့ LAMP feature ပါဝင်တတ်ပါတယ်။ router ထဲ မှာ ပါတဲ့ Linux OS ပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုး router တွေမှာဆိုရင်တော့ ရပါတယ်။
1 TB harddisk ပါတဲ့ router တစ်ခု နဲ့ raspberry pi တစ်ခု ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ offline webserver တစ်ခု ကောင်းကောင်း run လို့ ရပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ တစ်နေရာမှာ server တစ်ခု ထောင်ထားပြီးတော့ wifi repeater တွေနဲ့ ဆိုရင် စျေးလည်း ပိုမိုသက်သာနိုင်ပါတယ်။
ခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားပေးသည့် ကို saturngod ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခင်ဗျာ။ ကျနော်က ကချင်ပြည်နယ် ၊ဗန်းမော်မြို့ကပါခင်ဗျာ။
နည်းပညာပိုင်းမှာ လမ်းညွန်ပြသမည့်သူမရှိသည့် အတွက် ယခု forum ထဲမှ အစ်ကိုများကိုအားကိုးပါသည်ခင်ဗျာ။ ဖြစ်နိုင်မယ်
ဆိုလျှင် ကျနော့်ကို ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ။ ကျနော့်မြို့ လေးတိုးတက်စေချင်သည့် စိတ် နှင့် ယခု project ကိုစိတ်အားထက်သန်နေ
1. www.sinphytaw.com ကို online ပေါ်တွင်လည်း လွှင့်တင်ထားပါသည်။ Online ကနေလည်း၀င်ရောက်အသုံးပြုလို့ရပါသည်။
(ကို saturngod ကျေးဇူးပြုပြီး၀င်ကြည့်ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။ သူတို့လိုမျိုး မဟုတ်ရင်တောင် အနီးစပ်ဆုံး www.sinphytaw.com
လိုမျိုး Movies/MTV/MP3/PDF/Application များကို ကြည့်ရှုခြင်း/download လုပ်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်မည့် Intranet Website တစ်ခုကို
ကျနော့်လို နည်းပညာအားနဲသူ ရေးဆွဲနိုင်မည့် နည်းလမ်းကိုပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာ)
2. သူတို့က raspberry pi ကို မသုံးပဲ Xiaomi Mi ac router တစ်မျိုးတည်းသာသုံးပြီး Offline Webserver ကို Run ထားတယ်လို့သိရပါသည်။
3. Xiaomi Mi router ရဲ့ hdd ထဲကို xampp install လုပ်ပြီး wordpress အသုံးပြုပြီး offline webserver လုပ်လို့ရနိုင်မလားခင်ဗျာ(xampp
နဲ့ wordpress ကို အနည်းငယ် ကလိဖူးပါသည်။ သို့သော်လည်း wordpress သို့ movie upload လုပ်ရာတွင် maximun 2mb ပဲရသည့်
အတွက် maximum 100mb တိုးသည့် tutorial ကို လိုက်လုပ်ကြည့်သော်လည်းပဲ upload လုပ်လို့တော့ရသွားသည် Moive များမှာ
wordpress site တွင် မပေါ်လာပါ။ထို့အပြင် play လို့လည်းမရပါ။ )
4. ဖြစ်နိုင်လျှင် သူတို့ သုံးသည့် web development tool များကိုသာ အသုံးပြုပြီး www.sinphytaw.com လို ပုံစံတူ webserver သာ
ပြုလုပ်ချင်ပါသည်ခင်ဗျာ။ကူညီပေးပါအုံးခင်ဗျာ။ အစ်ကိုတို့က ကျနော့်သင်ဆရာမြင်ဆရာတွေပါခင်ဗျာ။
December 2015 Administrators
ကျွန်တော် တွေ့သလောက်ကတော့ Mi 1TB က SSH access ရပါတယ်။ SSH access ရတဲ့ အပြင် သူ့က OpenWRT ကို သုံးထားတဲ့ အတွက် linux အသေးစားလို run လို့ ရပါတယ်။ root access ရရင် linux လိုမျိုး server အသေးစားအနေနဲ့ run နိုင်ပါတယ်။ Networking နဲ့ linux အကြောင်းကိုတော့ အရင်ဆုံး နားလည်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် ကတော့ အဲဒီလိုမျိုး လုပ်တဲ့ နည်းက ငွေကုန်တာများပြီးတော့ ရေရည်မှာ update လုပ်ရတာ မလွယ်လှပါဘူး။ file တစ်ခု တင်ပြီးရင် အကုန်လုံးမှာ လိုက်တင် နေရပါလိမ့်မယ်။
အကုန်အကျသက်သာပြီး လွယ်ကူအောင် ကိုယ်ဘာသာ အိမ်မှာ server ထောင် ၊ wireless ကို extender တွေနဲ့ extend လုပ်။ file management ကို ကိုယ့် server ကနေပဲ လုပ်တာ ပို အဆင်ပြေမယ်။ ရေရည်အတွက်လည်း ကောင်းသလို ငွေကုန်လည်း သက်သာပါလိမ့်မယ်။
Router တွေမှာ domain name ကို IP ဆီ redirect လုပ်အောင် ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ www.sinphytaw.com က internet မှာ ဖွင့်မရပါဘူး။ router မှာ IP ကို redirect လုပ်ထားတဲ့ ပုံပေါ်ပါတယ်။
December 2015 edited December 2015 Registered Users
sorry ပါ ကို saturngod ခင်ဗျာ။ ကျနော် စာလုံးပေါင်းမှားသွားလို့ပါ။ www.sinphyutaw.com ပါ။ u တစ်လုံးကျန်သွားလို့ပါ။
Internet ကနေ၀င်လို့ရပါတယ်။ အကုန်အကျများတာတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်သူတို့လုပ်တဲ့နည်းက ကျနော့်အတွက်ပိုအ
ဆင်ပြေလို့ပါ။ ယခုလက်ရှိ ကျနော် Plex Media Server ကိုသုံးပြီး Nano Station M5 နဲ့ Movies/MTV များကို ကျနော့်မြို့မှာ
အခမဲ့လွင့်ထားပေးပါတယ်(plex လုပ်နည်းကိုလည်းမနှစ်က ဒီ forum မှာပဲမေးသွားတာပါ။ကို saturngod မမှတ်မိတော့ဘူး
ထင်ပါတယ်)။ plex က Movies ပဲရခြင်း။ အခြား PDF/Application များ share လို့မရခြင်း။ Andriod တွင် plex pass ခဏ
ခဏ တောင်းခြင်း။ plex client အသုံးပြုရပြီး website လို address ဖြင့် browser တွင် ၀င်လို့မရခြင်း စသည့်လိုအပ်ချက်
များရှိနေပါသည်။ ပြီးတော့ ကျနော့် cpe range မမှီတဲ့နေရာက သူတွေ အတွက်လည်း အဆင်မပြေလို့ပါ။ သူတို့လိုမျိုး portable
webserver ဆိုရင် update လုပ်ရင်တော့ ကို saturngod ပြောသလို အဆင်မပြေပေမယ့် cpe range ကိုထည့်တွက်စရာမလို
တဲ့အတွက် ကျနော့်အတွက် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဖြစ် နိုင်ရင် ကျနော့်ကို ဘယ်ကနေ စရမလဲဆိုတာကို www.sinphyutaw.com
ထဲ၀င်ကြည့်ပြီး လေ့လာပေးပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျနော့်မှာ အပူကပ်စရာဆိုလို့ ဒီ forum က သင်ဆရာမြင်ဆရာတွေ
ပဲ ရှိလို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အဲဒီ website က ကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲထားတာပါ။ ဘယ်လို သိသလဲဆိုတော့ SQL injection ရှိလို့ပါ။
သူတို့ရဲ့ database name က wifibox
အထဲမှာပါတဲ့ tables တွေက
table ကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ wordpress , drupal စတာတွေကို မသုံးပဲ ကိုယ်တိုင် ရေးထားမှန်း သိနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သူတို့ နဲ့ သိတယ်ဆိုရင် SQL injection လုပ်လို့ ရနေကြောင်းနဲ့ အဲဒီ အပေါက်ကို ပိတ်ဖို့ တစ်ချက်လောက် သတိပေးပေးပါ ခင်ဗျာ။
online ကော offline ကော ရအောင် လုပ်ဖို့က ကျွန်တော့်မှာ 1TB xiaomi ac router ရှိမှပဲ စမ်းလို့ ရပါလိမ့်မယ်။ လေ့လာကြည့်သလောက်တော့ SSH ဝင်လို့ ရတယ်။ openwrt ကို သုံးထားတယ်။ ဒါကြောင့် သူက linux server အသေးစားလေး အနေနဲ့ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့။ သူတို့ နဲ့ မရင်းနှီးပါဘူးခင်ဗျာ။ ကျနော် ဖုန်းထဲမှာ တခါပဲ ပြောဖူးပါတယ်။ ကျနော် ဖုန်းဆက်ဖြစ်ရင်ပြောပြလိုက်ပါ့မယ်။
သူတို့ဟာ သူတို့ ရေးထားတာဆိုတော့ ကျနော့် အတွက် အဆင်မပြေတော့ဘူးဗျာ။ ဒါဆိုရင် ကျနော် wordpress ကိုတော့နည်း
နည်းကလိတတ်တယ်ဗျ။ Xampp ကို Router Usb HDD ထဲ install လုပ်ပြီး Portable webserver အဖြစ် wordpress နဲ့
ပြုလုပ်လို့ ရနိုင်မလားခင်ဗျာ။ wordpress ကို plex မလုပ်ခင်မနှစ်က စမ်းကြည့်တာမှာ Wordpress ထဲ movie upload လုပ်
တာ maximum 2MB ပဲ ပေးထားလို့ online ပေါ်တွေ့တဲ ့tutorial နဲ့ Maximum ကို 200MB ထိတော့ တိုးသွားတယ် ။ဒါပေမယ့်
upload လုပ်လိုက်တဲ့ Movie က play လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒါဘယ်လို ဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ ဒီအတိုင်းရပ်ထားပြီး
plex နဲ့ ပဲလုပ်ထားပေးလိုက်တော့တာ။
ကျနော် က Online မှာ မလုပ်ပါဘူး။ Offline မှာပဲ သုံးမှာပါ။ သူတို့ လိုပြုလုပ်ဖို့ အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုရင်။ သူတို့လိုမျိုး
Intranet Portable Data Sharing Website တစ်ခုကို Wordpress နဲ့ ပြုလုပ်လို့ရနိုင်မလားခင်ဗျာ။ Wordpress နဲ့
ပြုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင် Wordpress အတွက် ဘယ် Plugin တွေနဲ့ ဘယ် Theme တွေကို အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကို
ညွန်ပြပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခုလို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ဖြေကြားပေးတဲ ကို saturngod ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Xiaomi 1TB ကို router ROM ပြောင်းလို့ ရပါတယ်။ DD-WRT ရရင် web server သွင်းလို့ ရပါပြီ။ http webserver ရရင် HTML website ဖြစ်ဖြစ် wordpress run အောင် လုပ်လို့ ရပါပြီ။
Wordpress အတွက် https://wordpress.org/plugins/player/ လိုမျိုး video player plugin ရှိဖို့ လိုပါတယ်။
Video format က MP4 နဲ့ ogg format ၂ မျိုး ရှိမှသာ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
ကို saturngod ခင်ဗျာ။ အစ်ကို ပြောတာတွေဟာ ကျနော့် အတွက်အရမ်းအကျိုးရှိပြီး အသုံးလည်းဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ယခုလို စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြတဲ့အတွက်လည်း အတိုင်းမသိကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။ သို့သော်လည်း ကျနော်
က နည်းပညာပိုင်းမှာ အားနည်းပြီး လုပ်ချင်စိတ်သာထက်သန်တဲ့အတွက် တစ်ချို့ အရာများဟာ အစ်ကိုတို့လို နည်းပညာ
ပိုင်းမှာ တတ်ကျွမ်းတဲ့သူတွေအတွက်လွယ်ကူပေမယ့်လည်း ကျနော့် အတွက်တော့ ခက်ခဲနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူး
ပြုပြီး ကျနော့်ကို ယခု project အတွက် step by step တစ်ခုချင်းဆီ ဘယ်ဟာဘယ်ဟာ လုပ်ဆိုပြီး ပြောပြပေးပါလား
လို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားနာပါတယ်ခင်ဗျာ။ သို့သော်လည်း ကျနော် ယခု project ကို လွန်စွာစိတ်အားထက်
သန်နေလို့ပါ။ online ပေါ်မှာလည်း Googling လုပ်ပါတယ်။ သို့သော် ကျနော် လုပ်ချင်တဲ့ www.sinphyutaw.com
လို ပုံစံမျိုး Guide မတွေ့ဘူးဖြစ်နေလို့ပါခင်ဗျာ။ ကျနော်ပဲမရှာတတ်တာလား မသိဘူးခင်ဗျ။ အစ်ကို ကို အပူကပ်ရတာ
လည်း ကျနော် အလွန်အားနာမိပါတယ်။ သို့သော်လည်း သိချင် ၊ လုပ်ချင်နေတဲ့စိတ် က တားမရဘူးဖြစ်နေလို့ပါခင်ဗျာ။
ယခု လောလောဆယ် ကျနော် စဉ်းစားထားတာက PC မှာ ပဲ Server ထောင်ပြီး Intranet website ကို router ကနေ တဆင့်
wifi နဲ့ အရင်စမ်းကြည့်မလို့ပါ။ အားလုံး အိုကေပြီဆိုမှ Xiaomi Mi router ၀ယ်မလို့ပါခင်ဗျာ။
step by step ပြောပြဖို့က မလွယ်လောက်ဘူးဗျ။ ကိုယ်တိုင် wordpress နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် အခြား open source တစ်ခု နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကြည့်ပါ။ မရတာတွေကို မေးပါ။ ကျွန်တော် ကြိုးစားပြီး ဖြေပေးပါ့မယ်။ step by step ရေးရင်တော့ စာအုပ် တစ်အုပ်စာလောက် ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်က လက်ရှိ Mac OS သုံးနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် တူညီနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲလို လုပ်ဖို့ လေ့လာဖို့ လိုတာတွေက
Network configuration on OS (Windows or Linux)
Web Development Basic (HTML, CSS , JS)
Opensource (Wordpress or Drupal or other CMS)
အဲဒါတွေကို အနည်းဆုံးသိထားမှသာ လုပ်ရတာ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ချင်စိတ်ရှိရင်တော့ ဖြည်းဖြည်း စမ်းကြည့်ပါ။ မရတာတွေကို မေးလို့ ရပါတယ်။ Google မှာလည်း ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။